किन चीनमा बच्चाहरुलाई कुखुराको रगतको इन्जेक्सन दिइन्छ ? जान्नुहोस् तथ्य « Sansar News
किन चीनमा बच्चाहरुलाई कुखुराको रगतको इन्जेक्सन दिइन्छ ? जान्नुहोस् तथ्य
२४ कार्तिक २०७८, बुधबार १५:०२
काठमाडौं । चीनका मानिसहरू अनौठो खानेकुरा र पेय पदार्थका लागि विश्वभर चिनिन्छन् । भनिन्छ, चिनियाँहरूले जे पनि खान सक्छन्। अहिले चीनमा एउटा यस्तो घटना बाहिर आएको छ जसको विश्वभर चर्चा भइरहेको छ । यहाँ मानिसहरूले बच्चाहरूलाई कुखुराको रगतको सुई दिइरहेका छन्। यो थाहा पाएर तपाईलाई पत्यार नलाग्न सक्छ तर यो पूर्ण सत्य हो । आउनुहोस् जानौं चीनमा किन यसो गरिरहेका छन् ?
चीनमा बालबालिकाको स्वास्थ्य समस्या हटाउन मानिसहरुले बालबालिकालाई कुखुराको रगतको सुई दिइरहेका छन् । चीनमा बालबालिकालाई सुपर किड्स बनाउने नाममा अभिभावकले यस्तो अनौठो काम गरिरहेका छन् । यो थाहा पाउँदा तपाईलाई अनौठो लाग्छ होला तर, यो चीनमा लामो समयदेखि चलिरहेको छ ।
एक मिडिया रिपोर्टअनुसार चीनमा आमाबाबुले बच्चाहरूको शरीरलाई फुर्तिलो बनाउन कुखुराको रगतको सुई लगाइराखेका छन्। सुइ लगाएसँगै बालबालिकामा हुने स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पनि समाप्त हुँदै गएको दाबी गरिएको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ कि यी सुई लगाएपछि क्यान्सर र टाउकोपनको समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । यसका साथै कुखुराको रगतमा स्टेरोइड पाइन्छ जसले बालबालिकालाई पढाइ र खेलकुदमा छिटो बनाउँछ ।
चीनमा बच्चाहरूलाई कुखुराको रगतको सुई लगाएर बच्चाहरूलाई सुपर किड्स बनाउनको लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। जसका कारण चीनमा कुखुराको बच्चाको क्रेज बढ्दै गएको छ । मानिसलाई देखेर अरु अभिभावकले पनि आफ्नो सन्तानलाई अगाडि बढाउने गरी यस्तो गरिरहेका हुन्छन् ।
एक रिपोर्टका अनुसार चिनियाँ बालबालिकाको आँखा कमजोर हुन्छ । करिब ७१ प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयका बालबालिका र करिब ८१ प्रतिशत हाई स्कूलका बालबालिकाको दृष्टि कमजोर छ । एजेन्सीबाट